Qabeentaa keessatti dhangii kan galfatootaa ifteessi.
Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun qabeentaa yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun qabeentaa yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun qabeentaa yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun qabeentaa yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun qabeentaa yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu
Lakkoofsa boqonnaa (E#)
Geessituu (LS fi LE)
Geesituu qaama galfataawwanii, isa iyyaatoo geessituuwwan banuu (LS) fi cufuu (LE)dhaan marsite, uuma. Sarara Caasaa irraa, saanduqa duwwaa fuuldura qaama isa ati geessituu uumuufii barbaadduutti argamu cuqaasiitii, sana booda qabduu kana cuqaasi. Saanduqa duwwa, isa qaama geessuu barbaadde sanatti aanee jiru, keessatti cuqaasiitii, isa booda geessituu kana ammas cuqaasi. Geessituuwwan martinuu addataa tahuu qabu. Qabeentaa qofaaf jiraata.
Title is: Galiinsa (qabeentaa)